तपाईं हेर्दै कार्टून त्यसपछि देखाउँछ प्रेम भने तपाईं निश्चित हास्यास्पद दृष्टिकोण र आवाज संग डोनाल्ड हाँस प्रेम थियो. Scruffy हाँस कार्टून बतख को परिवार मा एक पाँच रील स्लट खेल आधारित छ. तपाईंले यो खेल्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो स्लट बोनस साइट संग खेल आफ्नो 25 स्थिर paylines. यो खेल को पृष्ठभूमि एक पात मा लोटस फूल संग ताल र एक भ्यागुतो animated छ. पृष्ठभूमिमा मा कार्टून शैली संगीत तपाईं लगातार मनोरंजन रहन्छ. त्यहाँ रील गर्न रमाइलो तत्व थप्ने खेल प्रतीक रूपमा केही साँच्चै हास्यास्पद वर्ण हो. 25p को एक न्यूनतम यो खेल मा सट्टेबाजी सीमा सेट गरिएको छ र अधिकतम £ 250 प्रति स्पिन छ.
यो अद्भुत कार्टून शैली कि तपाईं प्ले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सबै भन्दा राम्रो स्लट बोनस साइट NetEnt विकास भएको थियो. एक लोकप्रिय ब्रान्ड जुवा उद्योग अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिर्जना क्यासिनो खेल सयौं नाम.
यो हास्यास्पद कार्टून आधारित स्लट खेल मा, तपाईं बतख को परिवार को प्रतीक पाउन सक्नुहुन्छ. एक पुरुष व्यापार मानिस धुनमा, एक गृहिणी धुनमा, एक teenaged धुनमा र आफ्नो सानो भाइ, एक जवान धुनमा. भङ्ग अन्डा गोले मा कार्डहरू प्ले यो खेल भनेर तपाईं मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ तल्लो मूल्य प्रतीक हो सबै भन्दा राम्रो स्लट बोनस साइट. पुरुष धुनमा संग शीर्ष दिन्छिन् 400 एक payline यसको प्रकारको पाँच मा पटक. त्यहाँ खेल दुई बोनस प्रतीक हो र उनि एक कुरूप duckling र अर्को बोनस प्रतीक हो.
जंगली बोनस: तितो duckling प्रतीक यो खेल को जंगली सुविधा छ र यो सबै अरूलाई लागि कवर. जब यो एक विजेता संयोजन देखा, प्रतीकको सम्पूर्ण रील ढाक्न एक अग्लो र सुन्दर धुनमा बढ्छ. यसरी तपाईं अधिक जंगली प्रतीक भएकाहरूले ठूलो जीत आशा गर्न सक्छौं. निःशुल्क spins समयमा, जंगली विस्तार जंगली रूपमा देखिन्छ, नियमित जंगली र Colossal जंगली तीन सारा रील कवर गर्न सक्ने.
स्क्याटर विशेषता: त्यहाँ उल्लेख गरिएका फ्री Spins संग एक लोगो छ र यो स्क्याटर सुविधा छ. अब तपाईं यसलाई के गर्छ थाहा, तपाईंलाई थाहा कसरी यसलाई गर्छ आवश्यक. जब तपाईं यो स्लट खेल आफ्नो सबै भन्दा राम्रो स्लट बोनस साइट, तपाईं नोटिस गर्नेछन् तीन स्क्याटर प्रतीक केही बोनस सुविधाहरू अनलक. यो पनि छ देखि पन्ध्र निःशुल्क spins हुन्छन् कि पाँच सुविधाहरू कुनै एक अवार्ड सक्नुहुन्छ.
जब तपाईं यो खेल खेल्न सबै भन्दा राम्रो स्लट बोनस साइट, तपाईं विभिन्न बोनस WINS साथ रमाइलो अनुभव हुनेछ.